ကျောင်းများအစ္စတန်ဘူလ်, ကြုံတွေ့မဟုတ်ယာဉ်အသွားအလာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဖွင့်လှစ် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်ကျောင်းများအသွားအလာအတွက်အတွေ့အကြုံရှိဒုက္ခဆင်းရဲပေး, အစ္စတန်ဘူလ်ဖွင့်လှစ်
09 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ခရီးသည်ရထား, ရထားလမ်း, ကြိုးဆွဲရထား, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, တူရကီ, ဓါတ်ရထား 0
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်3200 တထောင်သန်းကျောင်းသားများနှင့်ဆရာ, ဆရာမယနေ့သင်တန်းနှုန်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသောမွို့၌ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, မိဘသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုယာဉ်များပေးရန်ရှိသည်။ နိုင်ငံသားများ, IBB ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem Imamoglu သတိပြုခေါ်ဆိုမှုပေးခြင်း, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကျောင်းကို၏ပထမဦးဆုံးနေ့ရက်သည်ပြင်းထန်သောအသွားအလာယိုသို့မဟုတ်မတော်တဆမှုအစ္စတန်ဘူလ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူးသည်။
ကြောင့်ကျောင်းများအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) ၏ဖွင့်လှစ်ရန်, ကအတူတူအလုပ်လုပ်သစ်ကိုကျောင်းကယခုနှစ်ပထမနေ့၌အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်မဆိုယာဉ်ထိန်းရဲများနှင့် gendarmerie ရှောင်ရှားရန်လိုအပ်သောအစီအမံများကိုယူ။ အဆိုပါခေါ်ဆောင်သွားအစီအမံများနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ဥက္ကဌ Ekrem İmamoğluရဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသိပ်သည်းဆနှင့်ခေါ်ဆိုခကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါဘူးလျစ်လျူရှုရန်အသွားအလာကျေးဇူးတင်စကားအတွက်လေးနက်သောနှောင့်အယှက်။ ဒါဟာသူတို့ကြိုက်တတ်တဲ့နိုင်ငံသားများအခမဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အချိန် 08: 50 15 ဥရောပဖို့ Anatolian ဘက်အဖြစ်အကူးအပြောင်းအတွက်ဇူလိုင်လအတွင်းအာဇာနည်နေ့တံတားနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသိပ်သည်းဆ၏ညှနျကွားထဲမှာ Fatih Sultan Mehmet တံတားကြုံနေရသည်။ Bahçelievlerဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Ashura နေ့အခမ်းအနားများ Halkalı Fatih ရင်ပြင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာနယ်ဇင်း Express ကိုလမ်း, Dereboyu အဖွဲ့၏လမ်းညွှန်မှုနှင့် Muammer Aksoy လမ်းများကျော်ယူသိပ်သည်းဆများစနစ်တကျပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်လမ်းများ၌အတွေ့အကြုံရှိ Zeynebiye တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်တွင်မှာအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကို၏အဆငျ့ 40 ရာခိုင်နှုန်းကစောင့်ကြည့်။
အစ္စတန်ဘူလ် TRAFFIC DCC ကနေစီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်
IBB ဗျူရိုကရက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး, ရဲတပ်ဖွဲ့, Gendarmerie, ကျောင်း DCC ၏ပထမဦးဆုံးသောနေ့ ရက်မှစ. ယာဉ်အသွားအလာများစီးဆင်းမှုကိုညှိနှိုင်းနေပါတယ်။ ကင်မရာ၏မြို့ပြယာဉ်ကြောအောက်ပါပိတျဆို့နတေဲ့လမ်းများမှသက်ဆိုင်ရာဌာနများအားဖြင့်ချက်ချင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ပင်မလမ်းနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရဲနှင့်ယာဉ်အသွားအလာ directing သည့်စည်ပင်သာယာရဲတပ်ဖွဲ့ညှိနှိုင်းသူတို့ကျောင်းအလုပ်ကိုလုပ်နေတာ။ အရပ်သားအသွားအလာထိန်းချုပ်အသင်းများနှင့်အတူမိုဘိုင်း EDS ယာဉ်များကိုလည်းလမ်းများလုပ်နေပါတယ်။ 47 ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမတော်တဆမှုမှချက်ချင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများအတွက်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်, 19 ဆွဲဆောင်မှု IMM အဓိကလမ်းများကိုင်ထားဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ IMM ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွားအလာသတင်းအချက်အလက်ပလက်ဖောင်းနှင့်နေသောလူသွားလမ်းအသွားအလာစီးဆင်းမှုအတွက် drivers တွေကိုကူညီဖို့ Hung သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များဖြစ်ခဲ့သည်။
အစ္စတန်ဘူလ်လွန်းလမ်းကြောင်းတွင်-ပေါ်ကိုဆင်းသက်နှင့်တောက်ပအဆင်ပြေဖြတ်ပြီး 17 တထောင်ကျောင်းသားများအတွက်ကျောင်းဥယျာဉ်တော်အတွင်းမှာအသုံးပြုမှုအတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ဝန်ဆောင်မှုယာဉ်များအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းကျောင်းပတ်ပတ်လည် 118 ISPARK ယာဉ်ရပ်နားယနေ့။ ကျောင်းကို၏ပထမနေ့၌သူတို့သားသမီးယူလိုသူမိဘများ, ကျောင်းဘတ်စ်ကားသယ်ဆောင်။ traffic ပွိုင့်များတွင်ဆောက်လုပ်ရေးက်ဘ်ဆိုက်များမှာအလုပ်အကိုင်များကိုထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်ပြီးစီးခဲ့ပြီးဒါမှမဟုတ်အလုပ်ကျောင်းများဖွင့်လှစ်မှုကြောင့်ရက်ပေါင်းများစွာအဘို့ကိုဆိုင်းငံ့ခဲ့ပါတယ်။
2 250 1500 အကြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားကိုဖြတ်ပြီးတထောင်ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများ်ထမ်းဆောင်နေသည်။ နံနက် 06: ရှေ့ဦးစွာ မှစ. 00 အခမဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုနာရီ 14 ပေး: 00 အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးတက်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ဘတ်စ်ကား, Metrobus, ရထားလမ်းများနှင့်ပင်လယ်ရေကြောင်းခရီးရှည်တိုးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ IETT ကြောင့်ကျောင်းဖွင့်လှစ်ရန်ဆောင်းတွင်းအချိန်ဇယားလွန်။ ဘတ်စ်ကား, Metrobus,4139 တထောင်ပျံသန်းလမ်းကြောင်းအပေါ်ရထားလမ်းနှင့်ပင်လယ်, 763 တထောင်နောက်ထပ်ခရီးသည်စွမ်းရည်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ School တွင်ရဲတပ်ဖွဲ့မိုဘိုင်းအသင်းများ, ကျောင်းများ၏ရှေ့မှောက်၌ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါလုံခြုံရေးပြဿနာများအမျိုးမျိုးတို့ကိုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာဆန့်ကျင်ရပ်နေသည်။
အသစ်ပညာသင်နှစ်သောကြာနေ့ဇန်နဝါရီလ 17 2020 ၏ပထမဦးဆုံးကာလကိုအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ ပထမဦးစွာကြားဖြတ်အစိုးရအားလပ်ရက် 18-22 နိုဝင်ဘာလ 2019, 20-စာသင်ချိုးဇန်နဝါရီလ 31 2020 တှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်။ ဒုတိယစာသင်တနင်္လာနေ့နှင့်သောကြာနေ့ဇွန်လ3ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်ဖေဖော်ဝါရီလ 2020 19 2020 စတင်ပါလိမ့်မယ်။
ပဌမနေ့ကြေးစားတစ်ဦးပြတ်လပ်မှုကြုံတွေ့မရှိသေးပေAkçaray 02 / 08 / 2017 Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏အခမဲ့ပြေးဇွန်လအထိဤ 12-Sekapark ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံလမ်းရထားလိုင်းကိုယနေ့နံနက်ကတည်းကတရားစွဲဆိုခံရဖို့စတင်ခဲ့ပါသည်။ အဘယ်သူသည်လေယာဉ်လည်းအနည်းငယ်အနားယူရုံအခမဲ့များအတွက်လမ်းရထားစီးလာရောက်လည်ပတ်မှုအတွက်နုတ်ထွက်သွားကြသည်။ ပဌမနေ့၌ကြေးစား၏ပထမဆုံးနေ့Akçarayပြသနာမရှိပါဘူးရှားပါးမှုကြုံတွေ့မထားပါဘူး။ အဆိုပါနေဆဲမှတ်တိုင်အချို့ချို့ယွင်းချက်ရှိပါတယ်။ ပေါ်လာတာဟာအရင်မြို့တော်မြူနီစီပယ်Ulaşımpark Inc ၏အဆိုပါအော်ပရေတာ အဆိုပါ 42 ခုနှစ်တွင် bulunduruy လုံခြုံရေးအစောင့်ကိုရပ်တန့်။ 07.00-15.00 နှင့် 15.00-24.00 ကနေနှစ်ခုဆိုင်းအလုပ်လုပ်လုံခြုံရေးအစောင့်။ အဆိုပါမှတ်တိုင်မှာ turnstiles ဖြတ်သန်း, အိတ်များနှင့်လမ်းရထားပြင်ဆင်ထား၏ထိပ်ကိုလည်း detector ချင်တယ်။ ပန်းခြံ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ကခန့်အပ်ထားသော STATION ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု On-site များအတွက်ဘူတာရုံလမ်းရထားစနစ်က ...
နှုတ်ဆက်ပါတယ်, အစဉ်အဆက် Conjunction Dalaman ဘူတာများတွင်ကြုံတွေ့မဟုတ် 20 / 04 / 2018 Mugla Dalaman အတွက်ဘူတာရုံရှိပါသည်။ ဒါကြောင့်ဝေးနေတဲ့ရထားမဟုတ်သလိုတစ်ခုတည်းလက်မှတ်ကိုယူမ box ကိုရုံးကနေရောက်လာတယ်။ နှုတ်ကပတ်တရားတော် "ရှုပ်ထွေးမှုများ" စိတျမှကြွလာ ... မာစဲလိုသဘောထားကှဲလှဲမှုမြား, သွားတော့မယ်လို့နှုတ်ဆက်အတူဇာတ်လမ်း၏အကျဉ်းချုပ်, ပြန်လည်ဆုံဆည်းလာပါတယ်။ Dalaman ရထားဘူတာများတွင်, ဒီမှာအားလုံးဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါဘူး။ 1893 နှစ်ပေါင်း ... ဘတ်စ် Hilmi Pasha သူမျိုး၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဲဂုတ်တုပွညျ၏နောက်ဆုံး Khedive ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Sarsala ဂလားပင်လယ်အော် 12 ကီလိုမီတာ Dalaman နေနေ့၌သွားလေ၏။ သဘာဝတူသောအများကြီးမပိုမကြာခဏစဉ်းစားလာတယ်။ Hilmi Pasha ပထမဦးဆုံးအမဲလိုက်ဝါသနာအိုးအဖြစ်သူ Sarsala ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းဂိုဒေါင်တစ်ခုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူနှင့်အတူတက်ထားရန် Dalaman ကနေလမ်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ...
ကျောင်းစာအုပ် Metrobus ဘူတာ Dol အရသာရှိတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်ဖွင့်လှစ် 08 / 02 / 2016 အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်စာသင်ချိုးတနင်္လာနေ့မိုးသည်းထန်စွာအသွားအလာစတင်ပြီးနောက်ကျောင်းကပညာရေး၏အဆုံးနှင့်အတူစတင်: ကျောင်းများ Metrobus ဘူတာ Dol ကျောက်ခေတ်ဖြစ်ခဲ့သည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းအားလပ်ရက်၏အဆုံး၏ပညာရေးဆိုင်ရာစာသင်ရဲ့ start ပြီးနောက်အစ္စတန်ဘူလ်တနင်္လာနေ့မိုးသည်းထန်စွာအသွားအလာမှစတင်ခဲ့သည်။ traffic တစ်ချိန်ချိန်ရပ်တန့်ဖို့ရောက်လာသည်ကား, Metrobus ကဦးဆောင်နိုင်ငံသားတွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာရှည်စီတန်းအတွက်ရပ်လိုက်နိုင်သည်။ နောက်တဖန်သင်တန်းနှုန်းရာ၌စာသင်ချိုးရဲ့အဆုံးန်းကျင်သန်း 18 ပြီးနောက်ကျောင်းသားများကိုယနေ့။ traffic အစ္စတန်ဘူလ်ကျောင်းရဲ့ start နှင့်အတူရပ်တန့်မြို့သို့ရောက်လေ၏။ တစ်ချိန်ချိန်ကရှည်လျားမော်တော်ယာဉ်စီတန်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ Metrobus ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိုးသည်းထန်စွာအသွားအလာအများအပြားနိုင်ငံသားများလှည့်။ မြေပေါ်လူကူးတံတားတစ်ခုအာရုံစူးစိုက်မှုရှိခဲ့သည်။ မြေပေါ်အတွက်နိုင်ငံသားများ ...
Hakkari အင်တာမီလန်ကျောင်း Alpine နှင်းလျှောစီးပြိုင်ပွဲ 26 / 12 / 2013 Hakkari အင်တာမီလန်ကျောင်း Alpine နှင်းလျှောစီးပြိုင်ပွဲ: 'Alpine နှင်းလျှောစီးပြိုင်ပွဲကနေကျောင်းက' 'Hakkari တှငျဖှဲ့စညျးရောင်စုံမြင်ကွင်းများဖြစ်ခဲ့သည်။ ဝေးမြို့လယ် 12 2800 ကနေတည်ရှိပြီးအမြင့်သည့်နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းထဲမှာကျင်းပBüteပထမဦးဆုံးပြိုင်ပွဲပေါင်းမည်ကီလိုမီတာသူ 13 50 တန်းကနေအလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်းအားကစားသမားများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသားပညာရေးနှင့်လူငယ်န်ဆောင်မှုများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်သူအားကစားသမားများကစီစဉ်အားကစား၏ပြည်နယ်ညွှန်ကြားမှု၏ပြည်နယ်ညွှန်ကြားမှုဦးစွာနေရာတစ်ပြင်းစွာသောအပြေးပြိုင်ပွဲသို့ဝင်ကြ၏။ အနိုင်ရကျောင်းသားများကိုမြို့လယ်ကနေကလပ်နောက်ပိုင်းရက်စွဲမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါလိမ့်မည် join ရှိရာ5ယှဉ်ပြိုင်မှာ, Hakkari ခရိုင်မှာကိုယ်စားပြုပါလိမ့်မည် ...
Alpine နှင်းလျှောစီးပြိုင်ပွဲများ၏ကျောင်းများအင်တာမီလန်ပြည်နယ်ချန်ပီယံရှစ်သတ်သွားပါပြီ 14 / 01 / 2015 ကျောင်းလက်ဝါးကပ်တိုင် Alpine စီးတီးချန်ပီယံရှစ်နှင်းလျှောစီးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများသတ်သွားပါပြီ: တူရကီနှင်းလျှောစီးအဖွဲ့ချုပ်နှင့် Kars လူငယ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အားကစားဆိုင်ရာကျောင်း Alpine နှင်းလျှောစီးကနေနှင်းလျှောစီးပြိုင်ပွဲအဆုံးသတ်ပြည်နယ်ညွှန်ကြားမှုပြည်နယ်ချန်ပီယံကစီစဉ်။ တူရကီနှင်းလျှောစီးအဖွဲ့ချုပ်, 2014-2015 နှစ်ပေါင်း Osman ဗဟိုတရားရုံးချုပ်နှင်းလျှောစီးဒီဂရီတှငျကငျြးပခဲ့လူမျိုးအတွက်အားကစားသမားရိုက်ထည့်ရန်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်လှုပ်ရှားမှုများကိုအစီအစဉ်၏ Sarikamish အစိတ်အပိုင်း။ 25 100 ကျောင်းကအားကစားသမားအကြောင်းကိုထက်ပြိုင်ပွဲအတွက်ကဏ္ဍကိုဖန်ဆင်းအသေးစားအချင်းလူသား, အထီးကြယ်မိန်းမပျို, လုလင်ကို, ထိုဆုတံဆိပ်အခမ်းအနားပေးခဲ့ပါဝင်ခဲ့, ပထမဦးဆုံး3ဒီဂရီယူသူပြိုင်ကားသမားကျင်းပခဲ့တယ်။ ပြိုင်ပွဲညှိနှိုင်းရေးမှူး, တူရကီနှင်းလျှောစီးအဖွဲ့ချုပ်နှင့်ပြည်နယ်နှင်းလျှောစီးအဖွဲ့ဝင် ...
ဇူလိုင်လ 15 အာဇာနည်နေ့တံတား
စာနယ်ဇင်း Express ကိုလမ်း
ဗိုလ်ကြီး Yahya နေထိုင်သူများဓါတ်ရထားလိုင်းချင်ပါဘူး
ကျောင်းစာအုပ် Metrobus ဘူတာ Dol အရသာရှိတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်ဖွင့်လှစ်
နိုငျငံတျောသမ်မတူနာ: "ကျောင်းများ Interchange Bitsin ဖွင့်ကနေ"